Madaxweyne Xasan sheekh maxamuud oo maanta Si rasmi ah Xilka ula wareegay + Sawiro – GOBOLADA.COM
May 23, 2022 May 23, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Madaxweyne Xasan sheekh maxamuud oo maanta Si rasmi ah Xilka ula wareegay + Sawiro
Madaxweynaha 10aad Jamhuuridda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah xilka Madaxweynaha ugala wareegay madaxweynihii hore ee Jamhuuridda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Munaasabadda uu xilka kula wareegay Madaxweyne Xasan Sheekh waxaa ka qaybgalay Guddoonka Golayaasha Shacabka iyo Aqalka Sare Baarlamaanka 11aad, Xildhibaanno iyo marti sharaf kale.
Madaxweynaha xilka la wareegay ee Xasa Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in uu dib eegayo feylasha uu ku wareejiyay Madaxweynihii 9aad ee Jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si uu u hubiyo macluumaadka ku qoran.
Waxa uu sheegay in marka uu si tartiib-tartiib ah u aqriyo wixii uu ku arko uu dib ugu laaban doono Madaxweynaha xilka ku wareejiyay ee JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu hadalka u dhigay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhanka kale madaxweynaha manta baneeyay xafiiska ugu sareeya ee dalka maxamed Farmaajo ayaa sheegey in Madaxweynaha cusub uu ku wareejiyey dokumentiyo fara badan oo ku saabsan Hawada, Barnaamijka deyn cafinta, codsiga Somalia ee Xubinimada Golaha amaanka Qaramada Midoobey iyo Xeerka doorashada.
Waxaa uu xusay in hantida dadka Soomaaliyeed ay sideedii tahay, isla-markaana uusan jirin wax dhul danguud ah oo ay dowladiisu bixisay
Madaxweynihii hore ee Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa sidoo kale markii ugu horeysay ka hadlay ciidamada DF ee tababarka ugu maqan dalka Eritreya
Farmaajo ayaa sheegay inuu Madaxweynaha cusub ee Somalia ku wareejiyey galka iyo Dokumentiga ciidamo 5000 kun gaaraya oo tababar ugu maqan dalka Eritrea isagoo sheegay sababta dalka dib loogu soo celin waayay.
Madaxweynaha jamhuuriyada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ee Maanta Xilka la wareegay ayaa noqday Madaxweynihii ugu horreeyay labo jeer loo doorto hoggaaminta Dalka, waxaa horyaalla wax ka qabashada Amniga, Dhaqaalaha, Hagaajinta Siyaasinta, Xiriirka Caalamiga, Doorashada soo socota & qabyo-tirka Dastuurka.
Maxkamd ku Taala Magaalada Hargeysa oo maanta Xukun ku riday wariyaal oo uu ku jiro Cabdi Maalik Muuse Coldoon
Madaxweyne Deni oo sheegay in Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya uu balan qaad u sameeyay dawlad Goboleedyada